Anoshamisa WordPress kutsvaga & sefa plugin - WPSOLR
WordPress kutsvaga plugin yeElasticsearch, Solr, Algolia
wordpress yekutsvaga plugin yeElasticsearch, Solr, uye Algolia
Shanyira yedu Pricing kana tora yemahara muedzo
Isu takabatana takabatana matatu akanyanya kushandiswa ekutsvaga matekinoroji,
saka unogona ikozvino kunakidzwa nekutsvagirwa kwepasirese-pasi pasina kutambura kana mutengo.
Sarudza injini yako, tanga mumaminitsi, kwete vhiki
Ita kuti tsvagiridzo yako ikurumidze uye nehungwaru
50+ mitauro yakagadzirirwa
Kuita kusingaenzanisike neElasticsearch, Solr, kana Algolia
WooCommerce, bbPress, WPML, Polylang, ACF PRO, Zvishandiso, Yoast uye nezvimwe
Kurumidza kumisa yako yaunofarira grid plugin: Elementor, Toolset Views
AI yezvinyorwa nemifananidzo
20+ mademo emisoro mikuru yese
Madiki mabhizinesi & multinationals
Wedzera mazana ezviwanikwa pakutsvaga kwako
WooCommerce yekutsvaga plugin
WordPress yekutsvaga plugin
Elasticsearch yekutsvaga plugin
SolR yekutsvaga plugin
Elementor yekutsvaga plugin
WPSOLR "WPML-Yakagadzirira" certification
Polylang yekutsvaga plugin
bbPress yekutsvaga plugin
Yoast yekutsvaga plugin
Zvese Mune Imwe SEO yekutsvaga plugin
ACF yekutsvaga plugin
Google Vision yekutsvaga plugin
Google Natural Mutauro wekutsvaga plugin
Amazon Rekognition yekutsvaga plugin
Amazon Nzwisisa yekutsvaga plugin
Zvishandiso zvekutsvaga plugin
AI Kutsvaga - Kuuya munguva pfupi ne Weaviate
AI / Neural / Kudzika Kwakadzika / Semantic Tsvaga
Mubvunzo & Mhinduro: Google Dialog kuyerera
Kukurukurirana AI: RASA
Transformers uye vector embeddings: BATA, GPT-3, fastText
Kudzidza kwakadzika, aka Artificial Intelligence, aka Neural Networks, iri kwese kwazvino: kubva otomatiki kushandura, kunyora mameseji neGPT-3.
Asi kutsvaga kunokanganiswa neiyi maitiro. Chizvarwa chitsva cheinonzi "Vector yekutsvaga" maraibhurari kana masevhisi ari kubuda. Asi chinoshaikwa chinoshayikwa kuti chivaitise zvakawandisa: kureruka uye mutengo wakaderera.
WPSOLR inotarisira kuve ichi chinoshaikwa chinongedzo, nekuunza izvo zvisingawanzo maficha kuWordPress uye WooCommerce, sezvazvakaita kuElasticsearch, Solr uye Algolia.
Kumwe kwekutsvaga kweNeural, kufanana kweiyo neural, yakavhurika-sosi kana masevhisi anotarisirwa, ayo WPSOLR irikuferefeta parizvino:
OpenAI Re-Chinzvimbo (beta yakagadzirira)
Vertex Inofanidza Injini
Zvimwe zvezvinhu zvatinoda kuunza kuWordPress:
Dzazvino Models: Shandisa ese achangoburwa-akachinjika mamodheru (semuenzaniso, BERT, RoBERTa, MiniLM) yekusimbisa yemhando yepamusoro vimbiso, yekugadzira mhando vimbiso, uye kudzosa gwaro.
Modular: sarudzo dzakawanda kukodzera yako tekinoroji stack uye shandisa kesi. Sarudza dhatabhesi yako yaunofarira, faira inoshandura, kana modhi yemodheru.
Vhura: 100% inoenderana neiyo HuggingFace modhi hub. Vhara nzvimbo dzinopindirana nemamwe maratidziro (semuenzaniso, maTransformers, FARM, mitauro shanduri)
Scalable: Kuyera kumamirioni ezvinyorwa kuburikidza nekutora, kugadzirwa kwakagadzirira kumashure senge Elasticsearch / FAISS, Google inoteedzera ANN algorithms, uye yepamusoro-notch Vector dhatabhesi.
End-to-end: maturusi ese munzvimbo imwechete: faira kutendeuka, kuchenesa, kupatsanura, kudzidzisa, kuongorora, kuteedzera, kunyora, nezvimwe.
Mushambadzi ane hushamwari: nyore kugadzirisa, kuwedzera uye kugadzirisa.
Yakasarudzika: gadzirisa matemplate kune yako domain kana shandisa yako yakasarudzika DocumentStore.
Kuenderera mberi kudzidza: Unganidza nyowani yekudzidzira data kubva kune mushandisi mhinduro mukugadzira uye kugadzirisa ako mamodheru
Iva akarurama nguva dzose
Natural Mitauro Kugadziriswa
Dynamic Synonyms kubva kuAI
Dynamic Reranking kubva kuAI
Mafirita Widgets (inotsvedza, sarudza2, mutora wemavara…)
Tsvaga Analytics dashibhodhi
Uye nekuti kutsvaga kuri kutsvaga data chairo, isu tatoita zvabatanidza kune plugins anonyanya kushandiswa.
Shanda zvisina musono ne WooCommerce, bbPress, ACF Pro, Maturusi ekuona, WPML, Polylang, Yoast SEO, uye zvakawanda.
Tinogona zvakare kuvaka imwe yako kana zvichidikanwa.
Nunura zvirinani kurongeka kweWooCommerce uye mamwe ma plugins
Vhidhiyo yeAlgolia typo mazano
Iwe unogona zvakare kuyedza iyo yekurarama demo ne typo-shiviriro uye mativi >>
Chii chinonzi Dev studio WPSOLR?
Studio WPSOLR ndiro timu riri kuseri kweWPSOLR, yedu yekutsvagisa plugin yeWordPress & WooCommerce.
Studio inotaurisa makore ane ruzivo mukuvandudza uye kugadzirisa kune:
Tenga kubva kuWordPress uye Nyanzvi dzekutsvaga
Chii chinonzi Dev studio WPSOLR ?
Yedu yekutsvagiridza WPSOLR plugin ingangove inochinja-chinja uye inotyisa pamusika. Inokodzera 99% yevatengi vedu zvinodiwa.
Asi dzimwe nguva, munhu anoda zvishoma zvekuwedzera ruoko kuti asvike iyo chaiyo chiitiko.
mutsidzira yako yese saiti kuti isvike zvirinani SEO uye kutendeuka
Shandisa Elementor Pro, ACF PRO, uye zvishoma zvePP / JS / CSS kuvaka chero tsika plugin (CRM, yakazvimiririra yevatengi nzvimbo, nhengo,…)
Vaka nyowani yekutsvaga & Yekutsvaira UI
Nyora uye unganisa tsika Query
Tune kuwirirana nehutsika chinzvimbo
Taura nesu nezvese ako echinyakare basa
Shandisa Nyaya - Ita MyListing kutsvaga kubhururuka pamwe nemamirioni ezvinyorwa
Mumwe mutengi weMyListing akauya kwatiri nekuti saiti yake yakanga isingakwanise kurarama nemamirioni ake.
Kwete kungotsvaga chete kwainonoka, asiwo peji reimba neye Yoast sitemaps.
Isu takagadzirisa yedu yekuwedzera yeMyListing, uye ikozvino saiti yevatengi iri kubhururuka, kunyangwe paine miriyoni imwe zvinyorwa.
Mhanyisa MyListing uye mamwe madingindira
Shandisa Nyaya - Vandudza kunyatso kweyeMyListing mitsva yekutsvaga
Mutengi weMyListing akauya kuStudio yedu nekuti akange asingakwanise kuwana zvinyorwa nekukwana kwakaringana: dzimwe tsika minda dzisina kutsvagwa zvachose.
Isu taifanira kuvaka yakazara-yekuwedzera, nekuti myListing haisi kushandisa yakajairika yekuchengetedza nhoroondo.
Ikozvino, new new-add-on, vatengi vedu vatengi vanogona kutsvaga mune chero zvishoma ruzivo rwakabatana nemazita.
Nunura zvirinani kurongeka kweMyListing uye mamwe madingindira
Shandisa Nyaya - Bvisa 4,000 mifananidzo zvinyorwa kubva kuFrench Grocery saiti
Mutengi akatora 4,000 mifananidzo yezvigadzirwa zveGrocery.
Zvigadzirwa zvinotumirwa kunze (zvakawiriraniswa) kubva kune Kezia II mari inonyoresa software, kupinda muchitoro che WooCommerceMagasin Bio nach La Teste de Buch".
Mifananidzo inozoiswa muraibhurari ye media.
Kuti munhu angafananidza sei zvifananidzo nemazita echigadzirwa, kuti uise iwo iwo chaiwo mufananidzo kune icho chigadzirwa mifananidzo gallery?
By kutora zvinyorwa zvemifananidzo (OCR), uchishandisa iyo WPSOLR yekuwedzera ye Google Vision API.
Zvino na kunongedza mageji muElasticsearch nemagwaro avo eOCR.
Mushure meizvozvo, kuvhura raibhurari midhiya uye kutsvaga "Waini Bordeaux 2019" inodzosera iyo mifananidzo inoda kusungirirwa kune inoenderana chigadzirwa.
Tsvaga mifananidzo neArtificial Intelligence
Shandisa Nyaya - tsika chinzvimbo
Mutengi akauya kwatiri nekuti aiona kuti kutsvaga kwake kwaiwanzo kuvezwa zvekare mumapepa ekutanga muzvinzvimbo zvekutanga. Izvo zvisina kunaka kune bepanhau.
Kune rimwe divi, kugadzirisa padhuze kwaive kuratidza zvisingaite mumaposheni ekutanga zvinzvimbo.
Saka, takavaka imwe nyowani-patsva yakavakirwa pane iyo kuora chimiro cheElasticsearch. Iyi ficha inoita kuti ikwanise kukwikwidza mhedzisiro zvinoenderana nekugona kwayo uye nemisi yayo. Kunyangwe zvirinani, chiyero chekurongeka / zuva rinogona kuve rakakwenenzverwa muWPSOLR admin.
Gadzira mhinduro yekutsvaga kune zvaunoda